AnimeLog Maaha Dhimashada Crunchyroll ama Funimation - Kale
AnimeLog MA AHA Dhimashada Crunchyroll ama Funimation, Taasi maahan wax kale laakiin Clickbait
AnimeLog waa 'beddelka' loogu talagalay KissAnime kadib dhimashadeedii ugu dambeysay. Ama uguyaraan taasi waa waxa dadka qaar ugu yeeraan.
Iyo si aan la yaab lahayn - clickbait YouTubers iyo daabacayaasha ayaa sheeganaya inay tahay 'dhimashada Crunchyroll iyo Funimation'.
Mar dambe ma helayo wax-riixid intaas ka badan , oo aan lagu xusin wax lagu qoslo oo aan la taaban karin.
Qaar ka mid ah taageerayaasha anime waxay u muuqdaan inay ku raacsan yihiin inkasta oo laakiin ay ka hooseeyaan buunbuunin.
Nah f * ck it, Iyagu way buunbuuninayaan sida ugu badan….
War wanaagsan qof walba! Anime ugu dhakhsaha badan waxay bilaabi doontaa inay bilaash ku ahaato youtube hoostiisa markaas kanaalka Animelog, sidaa darteed lacag crunchyroll dheeraad ah laguma daawado pic.twitter.com/r8neDoP46m
- & # x1f351; (@Soomaalikabe) Ogosto 19, 2020
Animelog weeblayaashu waa farxad. Waxay sii wadeen sida ay tahay dhamaadka Funimation iyo Crunchyroll, markii maktabadda la heli karo ay u muuqato inay noqon doonto anime caadi ah sida Doraemon iyo Tezuka. Animes-yadaani waa ciriirigeyga, laakiin sida iska cad maahan tooda.
- massoluk - Nolosha Madoow Maaddada. (@nacaybtire) Ogosto 17, 2020
Waxaan ku faraxsanahay in Crunchyroll iyo Funimation laga saari doono ganacsiga AnimeLog dartiis. https://t.co/h2eewR0NCM
- Zaelkrie & # x1f1ff; & # x1f1e6; (@nacaybtire) Ogosto 17, 2020
Waxay u maleynayaan in istuudiyaha anime ee maraya lacag-bixinta YouTube-ka ay dileyso Funimation iyo Crunchyroll. pic.twitter.com/P38KrmKvof
- Rootsofjustice (@sootsofjustice) Ogast 18, 2020
Sida aad ku arki karto Tweets-kan, taageerayaasha qaarkood:
RUNTA run ahaan aamin in AnimeLog dili doono Funimation iyo Crunchyroll.
Taas oo waliba macnaheedu yahay adeegyo yaryar oo anime ah.
Qaarkoodna waxay aaminsan yihiin AnimeLog inay tahay 'mustaqbalka'.
Ama bedel fiican oo KissAnime ah.
Tani waa nooca walxaha ay tahay inaan ku qoslo.
Waan helay, taageerayaashu waa DESPERATE qulqulka anime si ay u horumariyaan. Waxayna aad ugu baahi qabaan adeeg siiya waxa ay doonayaan.
Laakiin… AnimeLog maahan gaashaankaaga hubka dhalaalaya waxaan ka baqayaa.
AnimeLog kuma filna in ay 'disho' wax
taxane anime ugu weyn ee waqtiga oo dhan
AnimeLog waa natiijo 30 istuudiyaha anime isu imaatinka si sh * aysan u dhicin. Waxay ku saabsan tahay waqtiga, had iyo jeer waxaan idhi iskaashigu waa habka ugu fiican.
Iyo qaar kaloo badan, waxay qorsheynayaan inay ku bixiyaan 3000 cinwaan oo anime ah BILAASH kanaalka YouTube-ka.
Waxay qorsheynayaan inay tan ku gaaraan sanadka 2022. Marka ha walwalin weli.
haddii ay ku guuleystaan ​​himiladooda sanadka 2022:
Waxay ka heli doonaan waxyaabo badan oo ka badan adeeg kasta oo soo-dejin oo lacag ah
Tani waa inay u muuqataa qof walba, waa sababta ay dadku aad ugu faraxsan yihiin iyagoo ka fikiraya inay ka takhalusi doonto adeegyada qulqulka ee la bixiyo.
Crunchyroll wuxuu leeyahay in ka badan 1000 + cinwaanno anime ee USA. waddamada kale waa meel kasta oo laga yimaado:
Waxay kuxirantahay wadankee ama qeyb kamid ah aduunka aan kahadleyno.
Tani sidoo kale waa run Funimation laakiin tirooyinku way ka duwanaan doonaan tan iyo intii ay haysteen ka yar anime oo ku saabsan barnaamijkooda.
Muuqaalkan dhexdiisa AnimeLog ayaa xukumi doona waxyeellona wuu geysan doonaa.
Laakiin taasi macquul maaha
Qof kasta oo u maleynaya AnimeLog inuu yahay badbaadiyaha weyn ee anime wuxuu halmaamayaa hal shay: lacag.
Sidee BILAASH loo maalgelin doonaa?
Sidee u noqon doontaa mid waarta?
Sidee macno dhaqaale u samayn doontaa?
Sidee Studio-yada Anime u macaashidoonaan?
Xayeysiisyada YouTube waa ismiidaamin buuxda. Dhamaan istuudiyaha anime ee wadaagaya gabalka yar ee udhaxeeya midba midka kale waa doqon.
Haddii ay go’aansadaan inay lacag ka dhigtaan sidan waxay dhawaan baran doonaan inay tahay ganacsi xun. Maaha sababta oo ah xayeysiintu lacag ma sameeyaan, laakiin maxaa yeelay waa mid aan ku habboonayn qaabka ganacsiga ee warshadaha.
Toei Animation iyo qof kasta oo kale, yar ama weyn, wuxuu bixin karaa anime “bilaash” ah inta ay doonaan. Waxay buuxin karaan kanaalka YouTube illaa ay ku qarxiyaan anime haddii ay doortaan.
Dhamaadka maalinta - lacag ayaa loo baahan yahay in la sameeyo, haddii kale waxay u taagan tahay Fursad la'aan in la barokiciyo shirkadaha geeyo anime.
Iyo ku ciyaarista gudaha nidaamka YouTube-ka maahan fikradda ugu caqliga badan.
Haddii istuudiyaha anime ay si wadajir ah u dhisteen WEBSITE-kooda oo ay qaabkan u qaataan aad baan ula dhacsanahay. Waxay lahaan lahaayeen xakameyn iyo ka faa'iideysi badan habkaas.
Taasi waa in ka badan maalgashi muddo dheer ah, waxaanan u arkaa waxa 'YouTube' ay samaynayaan inay yihiin maalgashi muddo gaaban ah.
Waxay ka sii fiicnaadeen inay sii sii qorsheeyaan naftooda dartii.
itaalku waa waxa kaliya ee adduunyada khuseeya
Sida kaliya ee AnimeLog u dhaawici karto CR / Funi:
Ruqsadaha iska celi oo diid inaad iibiso.
Bixi anime bilaash ah 5 sano oo toos ah.
Wax walba ku hay gudaha Japan.
Ka dhaqaaq YouTube-ka una gudub madal guriga dhexdiisa ah.
Laakiin xaqiiqadu waa Toei Animation iyo 29-da kale ee anime sidaan looma dhisin.
Ma haystaan ​​heerkaas lacag caddaan ah iyo hanti ay ku sii hayaan inay sii jiidaan. Tani waa habka 'Amazon' laakiin Amazon way ka baxday maxaa yeelay waxay lahayd maalgashadeyaal.
Istuudiyaha anime ee Japan ma laha taageero sidaas oo kale ah. Marka wax kale ma ahan waa riyo.
Waa riyo fiican, laakiin taageerayaasha anime waxay u baahan yihiin inay istaagaan oo ka fekeraan nacasnimada waxa ay malaynayaan.
Waan jeclahay fikradda AnimeLog laakiin waa hab qaldan haddii aysan wax ku keydsanin wadada. Sababtoo ah maahan maalgashi muddo dheer wax ku ool ah.
Aynu ku dhammeyno tan Tweets khuseeya:
Waxaa lagu baray AnimeLog, oo fadhigiisu yahay Japan, oo Mareykanku maalgaliyo, kanaalka Youtube ayaa qorsheynaya inuu anime ku bixiyo bilaash.
Qaarkood waxay leeyihiin waa 'Dhimashada Crunchyroll / Funimation'.
Gabi ahaanba maahan. https://t.co/4OK6EBYeOe
- Canipa | ALLAHAAD caabuddo waa dhintey & # x1f607; & # x1f47f; (@Soomaalikabe) Ogosto 17, 2020
Waqtigan xaadirka ah, waxaa kaliya laga heli karaa Japan, oo leh waxyaabo ay ka mid yihiin Future Boy Conan iyo carruur farabadan oo anime ah. Laakiin waxay qorsheynayaan inay subtitles ku daraan qaar ka mid ah sii deyntooda.
Laakiin waa tan arinta: Dakhliga xayeysiiska Youtube waligiis kama soo kaban doono qadarka ku lumay shatiga.
Xitaa xitaa kanaalada Youtube ee ugu waawayn waxay ku dhibtoon doonaan inay sameeyaan sida ugu badan Crunchyroll ama Funimation iyada oo loo marayo dakhliga xayeysiinta. In kasta oo xarumo badan oo warbaahin ah ay ku faafinayaan warkan shaashadda shaashadda ee 'One Piece, Dragon Ball Super, iyo My Hero Academia,' waxaa jirta fursad eber oo kuwaa ay ku sii jiri doonaan.
Isha ugu weyn ee dakhliga anime maanta waa lacagaha ruqsad siinta dibada ee adeegyada qulqulka. 'Riyada istuudiyaha anime oo iswada urursanaya oo animeyadooda oo dhan bilaash ugu sii deynaya Youtube' waa riyo dishay ugu yaraan kalabar dhamaan dakhliga soo gala dhamaan warshadaha.
Waqtigan xaadirka ah, warshadaha anime ee Mareykanka waa mid ay xukumaan Sony, AT & T, Netflix. Diidida inaad shati siiso shirkadahan oo aad kaligaa ku sii deyso adoo adeegsanaya Youtube waa xulasho xun oo loogu talagalay wax kasta oo aan ka ahayn ONA rakhiis ah ama filim gaaban.
waa maxay anime ugu weyn waqtiga oo dhan
Tani ma aha warshad yar oo dambe. Haddii aad sameyn doonto bilow, waa inay buuxisaa niche. Sida sida RetroCrush u sii deynayo anime-ga caadiga ah. Iyo AnimeLog waxay u badan tahay inay isla sidaas ku sameyn doonaan fasalada casriga ah.
Laakiin maahan inay 'la wareegto warshadaha' sida qaar sheegasho / rajo.
Isha warka: Twitter.
Dhibaatada Burcad Badeedka Anime Iyo Sida Loogu Baahan Yahay In Loo Xaliyo
Toei Animation’s “Free” Anime Streaming Service Ma Ka Hortagi Doonto Burcad Badeednimada
waqtiyada ugu fiican waqtiga oo dhan
duubista anime ee ugu fiican waqtiga oo dhan